Amazon မှ HD မှ streaming ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်။ ရက် ၉၀ အခမဲ့ရယူပါ Androidsis
Amazon မှ HD မှ streaming ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်။ ဒါကိုအခမဲ့ရက်ပေါင်း ၉၀ ကြိုးစားပါ
streaming ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုအကြောင်းပြောရင် Spotify အကြောင်းပြောရမယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးဂီတ streaming ဝန်ဆောင်မှု ၎င်းကိုစျေးကွက်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးထို အချိန်မှစ၍ နီးပါး၏အကျိုးစီးပွားကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည် သုံးစွဲသူသန်း ၃၀၀ သည်ပေးဆောင်ထားသောဗားရှင်းနှင့်ဗားရှင်းကိုကြော်ငြာများဖြင့်ခွဲဝေခဲ့သည်.
သို့သော်လက်ရှိဈေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောဂီတ streaming ဝန်ဆောင်မှုမဟုတ်ပါ။ Amazon, Apple နှင့် Google တို့သည် streaming music ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးသည်။ စျေးကွက်တွင်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး streaming ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
HD အရည်အသွေးဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုအသစ်စတင်ခြင်းကိုဂုဏ်ပြုရန်၊ အမေဇုံသည်အခမဲ့ဖြစ်သည် ဒီဝန်ဆောင်မှုအသစ်၏ရက်ပေါင်း 90 ရုံးတင်စစ်ဆေးအမေဇုံ၏ streaming ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်မှပေးသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးရန်စမ်းသပ်မှုတစ်ခု။
ပြီးတော့ငါပြောခဲ့တာကအတိတ်ကာလကစျေးဝယ်ကုမ္ပဏီကြီး Amazon က Amazon Music HD ကိုထုတ်လွှင့်လိုက်ပြီဆိုတာပဲ။ streaming နည်းပညာဖြင့်လက်ရှိကမ်းလှမ်းသောအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးဒီရေဒီယိုထဲမှာတွေ့နိုင်တဲ့အရည်အသွေးနဲ့ကိုက်ညီတယ်။
Amazon Music HD သည်လစဉ်စျေးနှုန်း ၁၄.၉၉ ယူရိုအသီးသီးရှိသည်ဒါကြောင့်ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုအသုံးချမယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများကိုအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးဖြင့်ယူရို ၅၀ နီးပါးသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည် Amazon Music အသုံးပြုသူဖြစ်လျှင် Amazon Music HD ကိုခံစားရန်တစ်လလျှင် ၅ ယူရိုပိုပေးရသည်။
အမေဇုံတေးဂီတ HD သည်၎င်း၏ကတ်တလောက်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အားရရှိစေသည် High Definition တွင်သီချင်းပေါင်းသန်း ၆၀ ကျော်နှင့် Ultra High Definition မှသီချင်းသန်းပေါင်းများစွာရှိသည်။ ဒီအခမဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရယူနိုင်ဖို့အတွက်တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်ကတော့အရင်က Apple ရဲ့ streaming ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရင်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုငါတို့မသုံးခဲ့ကြဘူး။
ဒီကမ်းလှမ်းချက်ရနိုင်သည် ဖောက်သည်အသစ်များအတွက်သာ မှတဆင့် 19 p.m. မှာအောက်တိုဘာလ 18 အထိ ဒီ link ကို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » အခမဲ့ဂီတ » Amazon မှ HD မှ streaming ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်။ ဒါကိုအခမဲ့ရက်ပေါင်း ၉၀ ကြိုးစားပါ
သင်၏စက်ကိရိယာများအားလုံးပေါ်တွင် Instagram မှမည်သို့ထွက်ရမည်နည်း